MONTERODILES APARTMENTS (Studio) - I-Airbnb
MONTERODILES APARTMENTS (Studio)
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJavier
Amagumbi azimeleyo, kwiifomathi ezintathu; I-STUDIO (2pax), Igumbi lokulala eli-1
kunye ne-terrace (2pax) kunye namagumbi ama-2 ane-terrace (4pax)
Ngeendawo ezikhethekileyo kunye nombulelo kulungiselelo lwabo lomda, bonke banombono wepanoramic ekunzima ukuhambelana nayo, iRodiles Beach, iLastres Lighthouse, iVillaviciosa Ria, iSierra del Sueve kwaye nangasemva unokuzibona iincopho. le Picos de Europa, abaxhasi bethu sele ulinike igama kwakhona Monterodiles njengoko "El Balcón del Paraiso".
Amaziko ethu anenkonzo yasimahla yokupaka yangaphandle kunye nendawo yokuzivocavoca. Sikwanayo negumbi lemidlalo elinentenetya yetafile kunye nebhola ekhatywayo yetafile, apho abathengi bethu banokonwaba khona.
Kwaye ukuba imozulu ilungile, ii-grill ezimbini ezineetafile kwigadi yangaphandle ziya kwenza ukuba ngexesha elifanayo livumba kwaye lixabise umgangatho weemveliso kunye nobuhle bendawo yeParadesi yeNdalo, ebizwa ngokuba yi-Asturias.
QAPHELA: Ngenxa ye-Covid-19, iindawo ezingaphakathi eziqhelekileyo zivaliwe ukuba zingasetyenziswa luluntu.
I-1.5 km ukusuka kwi-Marina yasePuntal kunye ne-2 km ukusuka kwichweba elidumileyo lokuloba laseTazones. Imizuzu eyi-10 ngemoto ukusuka kwidolophu yaseVillaviciosa kunye nemizuzu engama-30 ukusuka eGijón, eOviedo naseRibadesella.
Ukuzimela okupheleleyo, kuyafumaneka ukuba ufuna ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Villaviciosa